Friends of MoeMaKa - Free Burma News Collection | Tag | RIghts
Posted on November 3, 2016 by freeburma
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုသုတေသနဌာန ဒုတိယတာဝန်ခံ ကိုမျိုးရန်နောင်သိမ်းကို ဒီနေ့ နိုဝင်ဘာလ ၃ ရက် နေ့လည်လောက်မှာ ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်က ရန်ကုန်မြို့မှာ ဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
သူ့ကိုဖမ်းထားတာ ဟုတ်မှန်ကြောင်းနဲ့ ဘာကြောင့်ဖမ်းတယ်၊ ဘယ်ဥပဒေပုဒ်မနဲ့ ဖမ်းတယ်ဆိုတာ မသိသေးတဲ့အကြောင်း NLD ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဦးဉာဏ်ဝင်းက RFA ကို အတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်။
"ခေါ်သွားတယ်တော့ သိရတယ်ဗျာ၊ ၆၆ တို့ ဘာအကြောင်းအရာဆိုတာ ကျနော် မသိဘူး၊ သူ့ကိုခေါ်ထားတယ်၊ ဖမ်းထားတယ်ဆိုတာတော့ သိတယ်"
ကိုမျိုးရန်နောင်သိမ်းကို ပုဒ်မ ၆၆ (ဃ) နဲ့ ဖမ်းတာလို့ဆိုပြီး ဖေ့စ်ဘွတ်အင်တာနက်စာမျက်နှာ တွေမှာတော့ သတင်းတွေပြန့်နေပါတယ်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့လည်း လိုက်လံစုံစမ်းဆဲလို့ သိရပါတယ်။
via သတင်းမဵား http://ift.tt/2eYokl7 http://www.rfa.org
Posted in RIghts	| Tagged Feedly, IFTTT, RIghts	| Leaveacomment |
ဓာတ်ပုံ – Myo Yan Naung Thein Facebook
ရန်ကုန်၊ နိုဝင်ဘာ ၃ ။ ။ ဗေဒါ Institute ဦးဆောင်သူ ကိုမျိုးရန်နောင်သိန်းအား ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှ အမှုဖွင့်ထားသည့်အတွက် လှိုင်မြို့မရဲ စခန်း၌ ဆက်သွယ်ရေး ဥပဒေပုဒ်မ ၆၆ (ဃ) ဖြင့် စစ်ဆေးလျှက်ရှိနေကြောင်း ရဲစခန်းမှ တာဝန်ရှိ သူတစ်ဦးက မဇ္စျိမသို့ အတည်ပြုပြောကြားသည်။
“တပ်မတော်က တရားလိုလုပ်ဖွင့်တယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ အဲ့လိုတော့ သိရတယ်ခင်ဗျ “ ဟု ၄င်းက ပြောသည်။ သို့သော် မည်သူက တရားစွဲဆိုသည်ကိုမူ မဇ္ဈိမက သီးခြား အတည်ပြုနိုင်ခြင်း မရှ်ိသေးပါ။
ပုဒ်မ ၆၆(ဃ) လှိုင်မြို့မရဲစခန်းတွင် အမှုဖွင့်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး နိုဝင်ဘာ ၃ ရက် ၄ နာရီခန့်တွင် လာရောက် ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ကိုမျိုးရန်နောင်သိန်းနှင့် နီးစပ်သူတစ်ဦးဖြစ်သည့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်း သားဟောင်း ကိုအောင်ကျော်က ဆိုသည်။
“ ၆၆ (ဃ) လို့ပြောတယ် သူတို့ တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်က ပါတယ်လို့ပြောတယ် လာဖမ်းတဲ့ ၆ယောက် ၇ ယောက်ထဲမှာ ရဲ လည်းပါတယ် " ဟု ၄င်းက ပြောသည်။
ကိုမျိုးရန်နောင်သိန်း၏ အမျိုးသမီးကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာတွင် လှိုင်မြို့မရဲစခန်းသို့ လိုက်သွားနေပြီး အပြည့်အစုံ မသိရနိုင်သေးကြောင်း ပြောသည်။
“ကို မျိုးရန်နောင်သိန်း ကို ဖမ်းသွားတာပဲသိတယ်။ အစ်မတို့လည်း သေသေချာချာ မသိသေးဘူးရှင့်။ ဘာကြောင့် ဖမ်းတယ်ဆိုတာ " ဟု ကို မျိုးရန်နောင်သိန်း၏ အမျိုးသမီးဖြစ်သူက ပြောသည်။
ဗေဒါ Institute ဦးဆောင်သူ ကိုမျိုးရန်နောင်သိန်း
via မဇ္ဈိမ မာလ်တီမီဒီယာ http://ift.tt/2fiparg http://ift.tt/1nfHMox
ကိုထင်ကျော်ကို ပုဒ်မ ၅ဝ၅(က) နဲ့ ရုံးထုတ်
တပ်မတော်ကို ဝေဖန်ပြောဆိုမှုကြောင့် ပုဒ်မ ၅ဝ၅ (က)နဲ့ ဒီမိုကရေစီအရေး စဉ်ဆက်မပြတ်လှုပ်ရှားသူများ အင်အားစု MDCF ခေါင်းဆောင် ကိုထင်ကျော် ကို ဒီကနေ့ ရန်ကုန်တိုင်း မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် တရားရုံးမှာ ရုံးထုတ်ခဲ့ပါတယ်။
ကိုထင်ကျော် ရုံးထုတ်မှာ MDCF အဖွဲ့ဝင်တွေက ကိုထင်ကျော် အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ရေးအတွက် တရားရုံးရှေ့မှာ ငှက်လွှတ်ပြီး ဆုတောင်းခဲ့ကြသလို ၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေး၊ အစိုးရအပေါ် တပ်မတော်ရဲ့ ကြီးစိုးမှု လွတ်မြောက်ရေးနဲ့ မျှတတဲ့တရားစီရင်ရေးဖြစ်ဖို့ ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်နေ့က မြောက်ဥက္ကလာပ တရားရုံးရှေ့မှာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ချိန် တပ်မတော် ကို ဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့တဲ့အတွက် ရန်ကုန်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ် ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး ဇော်ဇော်က တရားလိုပြု တရားစွဲတာဖြစ်တယ်လို့ တရားခွင်မှာ တရားသူကြီးက ပြောပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂ဝ၁၃ ခုနှစ်က နန်းထိုက်တော်ဝင် စားသောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင် ဦးအိုက်လင်းကို ကိုထင်ကျော်က တရားစွဲဆို ထားတဲ့ အမှုကို မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် တရားရုံးက အမှုပိတ်သိမ်းခိုင်းတဲ့အတွက် ကိုထင်ကျော်က တရားစီရင်ရေးမဏ္ဍိုင်နဲ့ တပ်မတော်ကို ဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုထင်ကျော်ကို မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် တရားရုံးမှာ လာမယ့် နိုဝင်ဘာ ၉ ရက်မှာ ထပ်မံရုံးထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
via သတင်းမဵား http://ift.tt/2eJMxZH http://www.rfa.org
အင်းဝ အပ်ချုပ်ဆိုင် အမှုမှ တရားလိုအား ဆက်လက်စစ်ဆေး
အင်းဝအပ်ချုပ်ဆိုင်မိသားစုကို ရုံးထုတ်လာစဉ် (ဓာတ်ပုံ −ဖြိုးဝေလင်း)
အင်းဝအပ်ချုပ်ဆိုင်မှ အိမ်အကူ မိန်းကလေးနှစ်ဦးကို ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့သည့်အမှုတွင် တရားလို ဒုရဲမှူးမျိုးသိန်းကို အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက်၌ စတင်စစ်ဆေးခဲ့သည်။
အိမ်အကူမိန်းကလေးနှစ်ဦး ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရမှုနှင့် ပတ် သက်၍ ရန်ကုန်တိုင်းလူကုန်ကူး မှုတားဆီးနှိမ်နင်းရေးရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဒု ရဲမှူး မျိုးသိန်းက အိမ်အကူမိန်း ကလေးနှစ်ဦး၏ ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ တွင် ထိုးသွင်း၊ ပြတ်ရှဒဏ်ရာ အ မာရွတ်များတွေ့ရှိခဲ့ပြီး မစန်းကေ ခိုင်၏ ခန္ဓာကိုယ်တွင် ထိုးသွင်း၊ ပြတ်ရှ၊ မီးလောင်ဒဏ်ရာ အမာ ရွတ်များအပြင် လက်ချောင်း ၁၀ ချောင်းစလုံးမှ လှန်အချိုးခံထားရ သဖြင့် လက်ဆစ်များ သာမန် ထက်ပိုကြီးနေကာ လှုပ်ရှားမရ သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ရသည်ဟု ထွက်ဆိုခဲ့သည်။
တရားလို ဒုရဲမှူးမျိုးသိန်း သည် အိမ်အကူမိန်းကလေး နှိပ် စက်ခံရမှုမှ ၎င်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပုံ များကို အဓိကထွက်ဆိုခဲ့ပြီး စွပ်စွဲ ခံရသူများ၏ ရှေ့နေများ စစ်မေး ချက်များကိုလည်း ပြန်လည်ဖြေ ကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါအမှုကို အနောက် ပိုင်းခရိုင်တရားသူကြီးက တာဝန် ယူစစ်ဆေးနေပြီး တရားလိုအပါ အ၀င် တရားလို ပြသက်သေ ၁၀ ဦးခန့်တင်သွင်းထားကာ အောက် တိုဘာ ၂၀ ရက်သို့ ပြန်လည်ချိန်း ဆိုထားကြောင်း အနောက်ပိုင်း ခရိုင် တရားရုံးမှ သတင်းရရှိသည်။ အိမ်အကူ မိန်းကလေး နှစ်ဦး အား နှိပ်စက်ခဲ့သည့် ဒေါ်တင်သူ ဇာ၊ တင်မင်းလတ်(ခေါ်)ဖိုက်ဇဲ၊ မဆုမွန်လတ်၊ ဦးကိုလတ်(ခေါ်) မိုဟာမက်ရှဖီးလ်၊ ရာဇာထွန်းနှင့် မသီရိလတ်တို့ကို လူကုန်ကူးမှု တားဆီးကာကွယ်ရေး ဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၄/၂၉/၃၂ တို့ဖြင့် အနောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးတွင် စက်တင်ဘာ ၂၃ ရက်က တရားစွဲဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
နှိပ်စက်ခံရသည့် အိမ်အကူ မိန်းကလေးနှစ်ဦးကို ရန်ကုန်ပြည် သူ့ဆေးရုံကြီးတွင် စောင့်ရှောက် ထားပြီး ၎င်းတို့နှစ်ဦးအနက် မစန်း ကေခိုင်၏ အချိုးခံရသည့် လက် ချောင်းများအပြင် ညာဘက်လက် မှ အမာရွတ်များကို ခွဲစိတ်ကုသ ထားသည်။
အိမ်အကူမိန်းကလေးအား နှိပ်စက်ခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသူ ခြောက်ဦးကို အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက်တွင် ကျောက်တံတားမြို့နယ် တရားရုံးသို့ ပုဒ်မ ၃၂၅/၂၄၄/ ၁၁၄ တို့ဖြင့် ထပ်မံတရားစွဲဆိုတင် ပို့ခဲ့ကြောင်း ကျောက်တံတားမြို့ နယ်တရားရုံးမှ သိရသည်။
စွပ်စွဲခံထားရသူများအနက် ဒေါ်တင်သူဇာ၊ တင်မင်းလတ်၊ ရာဇာထွန်းနှင့် မစုမွန်လတ်တို့ကို ပုဒ်မ ၃၂၅/၃၄၄ ဖြင့် တရားစွဲဆို ခဲ့ပြီး ဦးကိုလတ်နှင့် မသီရိလတ် တို့ကို ပုဒ်မ ၃၂၅/၃၄၄/၁၁၄ တို့ ဖြင့် ကျောက်တံတားမြို့နယ် တရားရုံးတွင် ထပ်မံတရားစွဲဆိုခဲ့ ခြင်းဖြစ်သည်။
via7Days News http://ift.tt/2dXEkT0 http://ift.tt/1Vus636
မန္တလေးတိုင်း မြင်းခြံအကျဉ်းထောင်မှာ အကျဉ်းသားအခွင့်အရေးတွေ တောင်းဆိုပြီး ဒီကနေ့ အစောပိုင်းမှာ ဆန္ဒပြမှုတခု ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။
via သတင်း | Burmese – VOA http://ift.tt/2e4hK8T http://ift.tt/Tf1V41
Posted in Protests, RIghts	| Tagged Feedly, IFTTT, Protests, RIghts	| Leaveacomment |
Posted on October 9, 2016 by freeburma
မဟာသန္တိသုခကျောင်းကို ပီနန်ဆရာတော်အား ပြန်မပေးနိုင်ဟု သာသာနာရေး ရှင်းလင်း
မနေ့ကပြုလုပ်သည့် မဟာသန္တိသုခ ကျောင်းတိုက် ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ(ဓာတ်ပုံ – ထက်နိုင်ဇော်/ဧရာဝတီ)
ရန်ကုန်မြို့၊ တာမွေမြို့နယ်၊ နတ်ချောင်းရပ်ကွက်ရှိ မဟာသန္တိသုခကျောင်းတော်ကြီးကို နိုင်ငံတော်သံဃ မဟာနာယက အဖွဲ့(မဟန) က ပိုင်ဆိုင်သဖြင့် မလေးရှားနိုင်ငံ၊ ပီနန်ဘုန်းကြီးကျောင်းမှ ပီနန်ဆရာတော် ဦးပညာဝံသအား ပြန်ပေးမည်မဟုတ်ကြောင်း ယဉ်ကျေးမှုနှင့် သာသာနာရေး ၀န်ကြီးဌာန တာဝန်ရှိသူများက မနေ့ကနေပြည်တော်ပြုလုပ်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောသည်။
ကျောင်းတော်ကြီးသည် နိုင်ငံခြားသား ဖြစ်နေသည့် ပီနန်ဆရာတော်နှင့် လုံးဝမသက်ဆိုင်တော့ဘဲ သံဃာ ၅ သိန်း ၆ သောင်းကို ကိုယ် စားပြုသည့် သာသနာပိုင်ပစ္စည်း ဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံတော်အစိုးရက မဟနအဖွဲ့အား ရေစက်ချလှူဒါန်းထားသဖြင့် ကျောင်းတော်နှင့် ပတ် သက်သည့် စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်အားလုံးသည် မဟနအဖွဲ့တွင်သာရှိကြောင်း ယဉ်ကျေးမှုနှင့် သာသာနာရေးဝန်ကြီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးမြင့်ဦးက ဆိုသည်။
ဦးမြင့်ဦးက“ဒီကျောင်းတော်ကြီးကို နိုင်ငံတော် အစိုးရက မဟနအဖွဲ့ကိုလှူဒါန်းထားတာ ဖြစ်တယ်။ အဲဒီလို လှူဒါန်းထားတာဖြစ်တဲ့ အတွက် မဟနအဖွဲ့ကသာ စီမံပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ ဒီလိုလှူဒါန်းထားတယ်ဆိုတာကို နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွေမှာလည်း ဖော်ပြခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါ တယ်”ဟု မီဒီယာများသို့ ပြောသည်။
လက်ရှိ အချိန်တွင် ကျောင်းတော်ကြီးကို မဟနအဖွဲ့၏ အမိန့်ဖြင့် ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့က ချိတ်ပိတ်ထားကြောင်း၊ အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကိုလည်း နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံးထံ တင်ပြထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း ယဉ်ကျေးမှုနှင့် သာသာနာရေး ၀န်ကြီးဌာနက ပြောသည်။
ပီနန်ဆရာတော်၏ တပည့်တဦးဖြစ်သူ လန်ဒန်ဆရာတော် ဦးဥတ္တရက ၀န်ကြီးဌာန၏ တဖက်သတ်ရှင်းလင်းပွဲကို လက်မခံနိုင်သဖြင့် တန်ပြန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတခု ယနေ့ရန်ကုန်မြို့၌်ပြန်လည်ကျင်းပရန် စီစဉ်နေကြောင်း၊ ကျောင်းပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ အစိုးရ အနေဖြင့် စုံစမ်းရေးကော်မရှင်တခု ဖွဲ့စည်းသင့်ကြောင်း ဧရာဝတီသို့ မိန့်သည်။
“ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ ရှင်းရင် အထောက်အထားဆိုတာက သူတို့ဘက်မှာရှိသလို ဒီဘက်မှာလည်း ရှိတယ်။ အဲဒါကြောင့် စုံစမ်းရေး ကော်မရှင်တခုဖွဲ့ပြီး ဘယ်သူမှားလဲ မှန်လဲဆိုတာ ဆုံးဖြတ်သင့်တယ်”ဟု ဦးဥတ္တရက မိန့်သည်။
ဆရာတော်ဦးဥတ္တရ အပါအဝင် သံဃာတော် ၅ ပါးတို့သည် ပိုင်ဆိုင်မှုအငြင်းပွားနေသည့် ကျောင်းတိုက်၌ ဆက်လက်သီတင်းသုံး နေရာ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၂ ရက်နေ့တွင် တာမွေမြို့နယ် တရားရုံး၌ ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၉၅(က)၊ သံဃာ့ အဖွဲ့အစည်း ဆိုင်ရာ ပုဒ်မ ၁၄ တို့ဖြင့် တရားစွဲဆိုခံခဲ့ရသည်။
နောက်ပိုင်း သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများက ဆရာတော် ဦးဥတ္တရ အပါအဝင် သံဃာ ၅ ပါးတို့အနေဖြင့် နိုင်ငံတော်သံဃ မဟာ နာယကအဖွဲ့ကို တရားဝင်ပြန်လည် တောင်းပန်ပါက အမှုရုပ်သိမ်းသည်အထိ ကျေအေးပေးမည်ဟု ညှိနှိုင်းလာသဖြင့် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၃၀ ရက်နေ့တွင် ၂ ဖက်တွေ့ဆုံရန် ချိန်းဆိုခဲ့သော်လည်း ပွဲပျက်သွားခဲ့ရသည်။
“၂ ဖက်ညှိပြီးမှ မူလသဘောတူညီချက်ကို ချိုးဖောက်ပြီး မတောင်းပန်မီမှာ အမှုကိုအရင် ရုပ်သိမ်းခိုင်းတယ်။ ပြီးရင် ၂ ဖက်တွေ့ဆုံပြီး သတင်းမီဒီယာတွေရဲ့ ရှေ့မှာ ရှင်းမယ်လို့ ပြောတော့ ပွဲမဖြစ်တော့ပါဘူး”ဟု ယဉ်ကျေးမှုနှင့် သာသနာရေး ဝန်ကြီးဌာန ဒုညွှန်ချုပ် ဦးဇာနည်ဝင်းက ပြောသည်။
လန်ဒန်ဆရာတော်ကမူ သာသနာရေးမှ ပုဂ္ဂိုလ်များကို ၄င်းအနေဖြင့် ယုံကြည်မှု မရှိကြောင်း၊ တောင်းပန်ပြီးမှ မှားလို့ တောင်းပန်သည်ဟု ဆိုကာ ထောင်ထဲသို့ တန်းပို့မည်ကို စိုးရိမ်ကြောင်း ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
“မယုံလို့ အမှုကို အရင်ရုပ်ပေးပါလို့ ပြောတာ။ သွားတောင်းပန်ရင် မှားလို့ တောင်းပန်တယ်ဖြစ်မယ်။ ကျုပ်တို့က ဘာအမှားမှလည်း မလုပ်ထားဘူး။ တောင်းပန်လိုက်တာနဲ့ တရားရုံးတင်ပြီး ထောင်ထဲပို့မှာ။ ဒါကြောင့် အဲဒီလိုဆုံးဖြတ်လိုက်ရတာ”ဟု လန်ဒန် ဆရာတော် က မိန့်သည်။
သာသနာရေးဘက်ကမူ နှစ်ဖက်ပြေလည်အကျိုးရှိရန် ကြိုးပမ်းခဲ့သော်လည်း မအောင်မြင်သဖြင့် မဟနအဖွဲ့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းသာ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု ယခုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောသည်။
ကျောင်းတော်ကြီး၏ ပိုင်ဆိုင်မှု မြေဂရမ်နှင့် ပတ်သက်၍လည်း ပီနန်ဆရာတော်ကြီးက ၄င်းတွင် မြေဂရန် အထောက်အထား မူရင်း ရှိကြောင်း ကြေညာခဲ့သကဲ့သို့ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် သာသနာရေး ၀န်ကြီးဌာနကလည်း မြေဂရန်မူရင်းမှာ ၄င်းတို့လက်တွင်ရှိသည်ဟု ကြေညာခဲ့သည်။
ဧရာဝတီ၏ စုံစမ်းမှုအရ ပီနန်ဆရာတော်လက်ထဲတွင် ရှိသည့် မြေဂရန်မှာ ကျောင်းတော်ကြီး စတည်ထောင်စဉ် ၁၉၉၅ ခုနှစ်က မြေ ၂ ဧကပေါ်တွင် ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း မြေဂရန်ဖြစ်ပြီး သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ပိုင်ဆိုင်မှုမှာ ၂၀၀၀ ခုနှစ်က မြေ ၂.၂၆၇ ဧက ပေါ်တွင် ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း မြေဂရန် ဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။
“ကျောင်းတော်ကြီးရဲ့ မြေဂရန် မူရင်းက သာသနာရေး ဝန်ကြီးဌာနမှာ ရှိပါတယ်။ ပီနန်ဆရာတော်မှာ ရှိတယ်လို့ ပြောနေတာကို မီဒီယာ တွေ အနေနဲ့ ချင့်ချိန်ပြီးယုံကြပါ”ဟု ဒုညွှန်ချုပ် ဦးဇာနည်ဝင်းက ပြောသည်။
သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန အကြံပေး ဦးရဲမြင့်ကလည်း ယခုအချိန်တွင် ပီနန်ဆရာတော်ကြီးသည် နိုင်ငံခြားသား ဖြစ်နေသောကြောင့် နိုင်ငံခြားသားများအတွက် မရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်းများကို ကန့်သတ်သည့် ဥပဒေရှိကြောင်း၊ နိုင်ငံခြားသားတဦးဦးကို ပေးခြင်း၊ ကမ်းခြင်း၊ လွှဲပြောင်းခြင်း၊ လှူဒါန်းခြင်း လုံးဝမပြုရဟု ဖော်ပြထားကြောင်း ပြောသည်။
“သူ့(ပီနန်ဆရာတော်) အနေနဲ့ ဒီကို ပြန်ကြွလာမယ်ဆိုရင်လည်း အထောက်အကူပေးမယ်လို့ပဲ ပြောခဲ့တာ။ ဒီကျောင်းတိုက်ကြီး ပေးမယ် လို့ မပြောခဲ့ဘူး။ ဒီပစ္စည်းကို ပေးမယ်လို့လည်း လုံးဝ မပြောခဲ့ပါဘူး”ဟု ဦးရဲမြင့်က မီဒီယာများသို့ ပြောသည်။
The post မဟာသန္တိသုခကျောင်းကို ပီနန်ဆရာတော်အား ပြန်မပေးနိုင်ဟု သာသာနာရေး ရှင်းလင်း appeared first on ဧရာဝတီ.
via သတင်း – ဧရာဝတီ http://ift.tt/2dKghG9 http://ift.tt/1PXzsvq
လန်ဒန်ဆရာတော်အပါအဝင် သံဃာ ၅ ပါး အမှု ဥပဒေအတိုင်း ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည်
ပိုင်ဆိုင်မှုအငြင်းပွားနေတဲ့ ရန်ကုန်တိုင်း တာမွေမြို့နယ်က မဟာသန္တိသုခ ကျောင်းတိုက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး တရားစွဲ ဆိုခံထားရတဲ့ ဆရာတော် ၅ ပါးအနေနဲ့ မဟန ဆရာတော်တွေကို မတောင်းပန်တဲ့အတွက် ဥပဒေအတိုင်း ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးဇာနည်ဝင်း က ပြောပါတယ်။
ဒီနေ့ နေပြည်တော် သာသနာရေးနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနရုံးမှာ ကျင်းပတဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ဦးဇာနည်ဝင်းက ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် မဟာသန္တိသုခကျောင်းတိုက်ကို နိုင်ငံတော်သံယမဟာနာယက အဖွဲ့ထံ လှူဒါန်းထားပြီး ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၊ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကို လွှဲပြောင်းပေးအပ်ဖို့ မရှိဘူးလို့လည်း ပြောပါတယ်။
မဟာသန္တိသုခကျောင်းတိုက် ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး အရင်အစိုးရလက်ထက် ၂ဝ၁၄ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁ဝ ရက်နေ့ ညက ကျောင်းတိုက်မှာ သီတင်းသုံးနေတဲ့ လန်ဒန်ဆရာတော် ဦးဥတ္တရ အပါအဝင် သံဃာအပါး၂ဝ ခန့်ကို သံဃာ့မဟာနာယကအဖွဲ့အမိန့်နဲ့ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ သာသနာရေးဝန်ကြီးတို့က ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီး ခဲ့ပြီး ကျောင်းတိုက်ကို ချိတ်ပိတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်နေ့မှာ လန်ဒန်ဆရာတော် ဦးဥတ္တရနဲ့ သံဃာ ၄ ပါးကို လူဝတ်လဲပြီး ရန်ကုန်တိုင်း သာသနာရေးဦးစီး ဌာန တိုင်းဦးစီးမှူး ဦးစိန်မော်က တရားလိုလုပ်ပြီး သံဃာ့အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာဥပဒေ ၂ဝ/၉ဝ နဲ့ တရားစွဲဆိုထား တာဖြစ်ပါတယ်။
via သတင်းမဵား http://ift.tt/2d2Y2JX http://www.rfa.org
Posted in Monks, RIghts	| Tagged Feedly, IFTTT, Monks, RIghts	| Leaveacomment |
Posted on October 6, 2016 by freeburma
မြန်မာလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ၄ ဦး နုတ်ထွက်
ရန်ကုန်မြို့က အင်းဝအပ်ချုပ်ဆိုင်မှာ အိမ်အကူ မိန်းကလေး ၂ ဦး ညှင်းပမ်းနှိပ်စက်ခံရမှုကို လိုက်ပါဆောင်ရွက်ရာမှာ ပျက်ကွက်ခဲ့တယ်လို့ စွပ်စွဲခံခဲ့ရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် ၄ ဦးကို နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးက နုတ်ထွက်ခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်။
via သတင်း | Burmese – VOA http://ift.tt/2dPVqVR http://ift.tt/Tf1V41
via BBCBurmese.com | ပငျမစာမကျြနှာ http://ift.tt/2dWiAJM http://ift.tt/2aCIDV8
မန္တလေးမြို့ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်အတွင်းရှိ ဓမ္မာရုံတခု ဝတ်ရွတ်နေချိန်မှာ အသံချဲ့စက်ကြိုးများကို ဆွဲဖြုတ်ပစ်ခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်ကို ပုဒ်မ ၂၉၆အရကျူးလွန်ကြောင်းထင်ရှားတဲ့အတွက် ထောင်ဒဏ်၃လနဲ့ ဗီဇာစည်းကမ်ဖောက်ဖျက်မှုအတွက် ငွေဒဏ်တစ်သိန်း ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ အေပီသတင်းကို အခြေခံပြီး ကိုငြိမ်းချမ်းက ပြောပြမှာပါ Originally published at – http://ift.tt/2dyIL6v
via VOA Burmese (uploads) on YouTube https://www.youtube.com/watch?v=q3n3gWU_b6c https://youtube.com/playlist?list=UUv-YbGueeYCp8_CdjgXQD3A
Posted on September 30, 2016 by freeburma
ရန်ကုန်၊ စက်တင်ဘာ ၃၀ ။ ။ လန်ဒန် ဆရာတော် ဦးဥတ္တရအပါအ၀င် တရားဆွဲဆိုခံထားရသည့် မဟာသန္တိသုခကျောင်းမှ ဆရာတော် ငါးပါးကို လွှတ်ပေးရန် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော်ကို ထပ်မံတင်ပြသွားမည်ဟု ရှေ့နေ ဦးသိမ်းဝင်းက မဇ္စျိမကို ပြောသည်။
“အရှေ့ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှာ တရားလိုပျက်ကွက်ခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တရားသေ လွှတ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုတာ ကို လက်မခံတဲ့အတွက် ခရိုင်တရားရုံးကို ၂၈ ရက်နေ့က တတ်တယ်။ ခရိုင်ကလည်း ပယ်တဲ့အတွက် အခွင့်အရေး တစ်ရပ်အနေ နှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော်ကို ဆက်တက်ဖို့ စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတယ် “ လို့ ၄င်း က ပြောသည်။
တရားလို ဖြစ်သူ ဦးစိန်မော်က သီရိလင်္ကာသို့ ခရီးသွားသည်ဟုဆိုကာ ၈ လ ပိုင်း ၁၉ ရက် ရုံးချိန်းတွင် ရောက်ရှိလာခြင်း မရှိဘဲ အခြားတစ်ဦးကို ကိုယ်စား ခွင့်တိုင်စေခဲ့သည်ဟု ဦးသိမ်းဝင်းက ပြောသည်။
တရားလိုမှ ဦးတိုက်လျှောက်ထားရမည့် အမှုမျိုးတွင် ကိုယ်တိုင် ခွင့်တိုင်ဖို့ပျက်ကွက်ပါက တရားခံကို လွှတ်ပေးရန် ဥပဒေပါ အခွင့်အရေးတစ်ရပ်အနေဖြင့် ဆရာတော်တွေကို လွှတ်ပေးဖို့ လျှောက်ထားတာလို့ ၄င်းက ပြောဆိုသည်။
လန်ဒန်ဆရာတော် အပါအဝင် တာမွေမြို့နယ် မဟာသန္တိသုခ ကျောင်းတိုက်မှ ဆရာတော်ငါးပါးကို စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက်တွင် ၄၈ ကြိမ်မြောက်အဖြစ် တာမွေမြို့နယ်တရားရုံးတွင် ရုံးထုတ်ခဲ့သည်။
အောက်တိုဘာ ၄ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော်သို့ ဆက်လက်တက်ရန်ရှိသောကြောင့် ရက်ချိန်း ယူရန် မြို့နယ်တရားရုံးတွင်လျှောက်ထားခဲ့ပြီး တာမွေမြို့နယ်တရားရုံးမှ လက်ခံခဲ့သောကြောင့် အောက်တို ၁၄ ရက်နေ့တွင် ၄၉ ကြိမ်မြောက်အဖြစ် ဆက်ချိန်းထားသည်ဟု လန်ဒန်ဆရာတော် ဦးဥတ္တရ မဇ္စျိမသို့ မိန့်သည်။
ဆရာတော် ငါးပါး တာမွေမြို့နယ် တရားရုံးမှာ အမှုတွဲအမှတ် ၁၆၃/၁၄ သံဃာတော် အဖွဲ့စည်းများဆိုင်ရာ ဥပဒေ ၂၀/၉၀ ပုဒ်မ ၁၄ နှင့် ၂၀၁၄ခုနှစ်က တရားစွဲဆိုထားခြင်း ဖြစ်သည်။
သာသနာညှိုးနွမ်းစေမှုပုဒ်မဖြင့် အရှေ့ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးတွင် တရားရင်ဆိုင်နေခဲ့ရာမှ ဒီဇင်ဘာ ၁၀ရက် ၂၀၁၅ တွင် တရားရှင်လွှတ်ပေးထားပြီး သံဃာတော် အဖွဲ့စည်းများဆိုင်ရာ ဥပဒေဖြင့် ယခုတရားရင်ဆိုင်နေခြင်းဖြစ်သည်။
ရန်ကုန်မြို့ တာမွေ မြို့နယ် နတ်ချောင်းရပ်ကွက်ရှိ မဟာသန္တိသုခကျောင်းတော်ကြီးကို ၂၀၁၄ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၁ ရက်နေ့ ညပိုင်းတွင် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး ဘုန်းကြီး ၂၈၁ ပါး၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့၊ ယခင် သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများက ကျောင်းတိုက်ကို ၀င်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီး ကျောင်းမှ သံဃာတော် ၇ ပါးကို ထိန်းသိမ်းခဲ့သည်။
လန်ဒန် ဆရာတော် ဦးဥတ္တရ
via မဇ္ဈိမ မာလ်တီမီဒီယာ http://ift.tt/2dd0dxd http://ift.tt/1nfHMox
Posted on September 26, 2016 by freeburma
via VOA News: မြန်မာသတင်း http://ift.tt/2dmtVhX http://ift.tt/Tf1V41
အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင် ဥက္ကဌ ဦးဝင်းမြနှင့် အဖွဲ့ဝင် ဦးဇော်ဝင်းတို့ကို ယနေ့ ကျင်းပသည့် လွှတ်တော် အစည်းအဝေးအပြီး တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ – ထက်နိုင်ဇော်/ဧရာဝတီ)
အင်းဝ အပ်ချုပ်ဆိုင်မှ အိမ်အကူ အမျိုးသမီးငယ် ၂ ဦး ညှဉ်းပန်း နှိပ်စက်ခံရမှုကို ဖြေရှင်းရာတွင် လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်သည် နိုင်ငံသား များ၏ မူလ အခွင့်အရေးများကို ကာကွယ် စောင့်ရှောက်နိုင်ခြင်း မရှိသဖြင့် အဖွဲ့ဝင် တချို့ ကို ထိရောက်စွာ အရေးယူပေးရန် တိုက်တွန်းကြောင်း အရေးကြီးအဆိုကို ယနေ့ ကျင်းပသည့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်က အတည်ပြုလိုက်သည်။
ယင်းအဆိုကို မဲခွဲ ဆုံးဖြတ်ရာတွင် ထောက်ခံမဲ ၃၇၄ မဲ၊ ကန့်ကွက်မဲ ၁ မဲနှင့် ကြားနေမဲ ၈ မဲ တို့ဖြင့် အတည်ပြုခဲ့သဖြင့် လွှတ်တော်၏ တိုက်တွန်းချက်ကို အစိုးရအနေဖြင့် အကောင်အထည် ဖော်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက ပြောသည်။
ပုလဲမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ခင်စန်းလှိုင်က“လွှတ်တော်ရဲ့ လုပ်ငန်းတာဝန်ကတော့ ပြီးသွားပြီ။ ကော်မရှင်က လူတွေကို ဥပဒေကြောင်းအရ အရေးယူမှာလား။ မယူဘူးလား ဆိုတာကတော့ အစိုးရက ဆုံးဖြတ်ရမှာပါ”ဟု မီဒီယာများသို့ ပြောသည်။
သမ္မတရုံး ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဇော်ဌေးက လွှတ်တော်၏ ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် ကော်မရှင်၏ သမ္မတရုံးသို့ တင်ပြချက်အပေါ် မူတည်၍ အင်းဝ အပ်ချုပ်ဆိုင် အမှုကိစ္စကို ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
“လွှတ်တော်ကလည်း သူတို့ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို သမ္မတရုံးဆီကို ပို့မယ်။ ကျနော်တို့ကလည်း ကော်မရှင်ကို ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး သမ္မတရုံးကို စောလျင်စွာ တင်ပြဖို့ ညွှန်ကြားထားတယ်။ အဲဒီ ၂ ခုအပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ဆက်လက် ဆောင်ရွက်မှာပါ”ဟု ပြောသည်။
သို့သော် အင်းဝ အပ်ချုပ်ဆိုင် အမှုကိစ္စကို အဓိက တာဝန်ယူ ဖြေရှင်းခဲ့သူ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်၊ လူ့အခွင့် အရေးဌာနမှ ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် ဦးဇော်ဝင်းကမူ “သဘောရိုးဖြင့်” ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းသာ ဖြစ်ကြောင်း လွှတ်တော်တွင် ခုခံခဲ့သည်။
“အင်းဝ အပ်ချုပ်ဆိုင် အမှုဖြစ်စဉ်ကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့ထံသို့ လိုအပ်သလို စိစစ် အရေးယူ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါရန် အကြောင်းကြားခဲ့ကြောင်းနဲ့ ဒုတိယအချက်မှာ နစ်နာသူများအား ကုစားပေးနိုင်ရေးအတွက် သဘောရိုးဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းသာ ဖြစ်ပါ ကြောင်း လေးစားစွာ တင်ပြအပ်ပါတယ်”ဟု ဦးဇော်ဝင်းက ပြောသည်။
ယနေ့ အဆိုကို ဆွေးနွေးသူ အများစုကမူ ကော်မရှင်၏ လုပ်ဆောင်ချက်ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန်ခဲ့ပြီး ကော်မရှင်ကို ထိထိရောက် ရောက် အရေးယူရန် တိုက်တွန်းခဲ့ကြသည်။
ဗုဗ္ဗသီရိမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးရည်မွန်က“သမ္မတက အရေးယူတာ၊ အစိုးရအဖွဲ့က အရေးယူတာကို ထိုင်စောင့် နေမယ့်အစား ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် အရေးယူသင့်ပါတယ်”ဟု လွှတ်တော်တွင် ဆွေးနွေးသည်။
အင်းဝအပ်ချုပ်ဆိုင် မိသားစုသည် ရာဇ၀တ်မှု အကြိမ်ကြိမ် ကျူးလွန်ခြင်း၊ နိုင်ငံသား အခွင့်အရေးများကို အကြိမ်ကြိမ် ချိုးဖောက်ခြင်းများ ကျူးလွန်ခဲ့သည်ကို ဥပဒေ အရ ထိရောက်စွာ အရေးယူရမည့် အစား ငွေကြေးညှိနှိုင်းခဲ့သည့် ကော်မရှင်၏ လုပ်ရပ်သည့် လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်၏ အခန်းကဏ္ဍကို သေးသိမ်စေကြောင်း ဝေါမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးတင်ထွေးက လွှတ်တော်တွင် ပြောသည်။
“လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုကို ပေါ့ပေါ့တန်တန် သဘောထားခဲ့ပါတယ်။ ဖြစ်ပွားမှု အတိမ်အနက်ကို မသိဘဲ ဥပဒေကြောင်းအရ အမြင့်ဆုံး ပြစ်ဒဏ် ပေးရမယ့်အစား အနိမ့်ဆုံး ပြစ်ဒဏ်ဖြစ်တဲ့ ငွေကြေးနဲ့ ဖြေရှင်းစေခဲ့ပါတယ်။ ဒီကော်မရှင်ရဲ့ လုပ်ရပ်ကြောင့် တမျိုးသားလုံးရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ ထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်”ဟု ဦးတင်ထွေးက ပြောသည်။
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၅၈ တွင် နိုင်ငံတော်သည် ကျေးကျွန်ပြုမှု၊ လူကုန်ကူးမှုကို တားမြစ်သည်ဟု ဖော်ပြထားကြောင်း လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အများစုက ဆိုသည်။
ကော်မရှင်ကို ဖျက်သိမ်းပြီး အသစ်ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ ကော်မရှင် အသစ်တွင် ပြည်သူပေးသော လစာကို ယူ၍ ကုလားထိုင်ပေါ်တွင် မှိန်းမနေဘဲ မြေပြင်ပေါ်တွင် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ သွားရောက် လေ့လာနိုင်သူများကို ခန့်ထားရန် ၄င်းက အကြံပြုခဲ့ပြီး ယခင် အစိုးရ လက်ထက်က ရာထူးကြီးကြီး ရခဲ့သူများကို တာဝန်မပေးရန် မန်တုံမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်နန်းမိုးက အစိုးရကို တိုက်တွန်းခဲ့သည်။
“မိမိကိုယ်သိ မိမိသည် အရာရာတတ်နေသည်ဟု ယူဆနေသူ မိမိ ကိုယ်မိ မာန်တက်နေသူသည် မိမိကိုယ်မိမိ တိုးတက်ပြောင်းလဲမှု ရှိအောင် မလုပ်ဘဲ မာန်တက်နေသည့် မျက်နှာ၊ မာန်တက်နေသည့် ပြောဆိုမှုများကို အသက်ပြီးသူ ရာထူးကြီးသူများတွင် တွေ့ရှိရပါသည်။ အသက်ကြီးတိုင်း ရာထူးကြီးရတိုင်း အသိညဏ် မမြင့်မားပါ” ဟု သူက လွှတ်တော်တွင် ဆွေးနွေးသည်။
ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်တချို့က နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်ကို ဒေါ်စုကြည်ဟု လည်းကောင်း၊ ကျမလည်း တခါတရံ အိမ်ဖော်မလေးများ ကို ရိုက်နှက်တာပါပဲဟု လည်းကောင်း ပြောကြားခြင်းသည် တရား ဥပဒေကို ချိုးဖောက်ပြီး သူတပါး၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိပါးစော်ကားမှု များ ပြုလုပ်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဗဟန်းမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးထွန်းမြင့်က ပြောသည်။
“ကော်မရှင်ဟာ မည်သို့ပင် ခုခံကာကွယ် ပြောကြားစေကာမူ လူမဆန်စွာ ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ ပြစ်မှုတခုကို ငွေကြေးနဲ့ ဖုံးဖိဖို့ ကြားဝင် စွက်ဖက် ကြိုးစားရာ ရောက်ခဲ့ပါတယ်”ဟု ဦးထွန်းမြင့်က ပြောဆိုခဲ့သည်။
တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်များဘက်က လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်၏ ဆောင်ရွက်ချက်များသည် အားနည်းချက်များ ရှိသည်ဟု ဝေဖန်ပြောဆိုသော်လည်း ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ကမူ ယခုကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ တစုံတရာ ၀င်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ခြင်း မရှိပါ။
အင်းဝအပ်ချုပ်ဆိုင် နှိပ်စက်မှုကို ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်သို့ တိုင်ကြားခဲ့သူ Myanmar News Now မှ ကိုဆွေဝင်းက “လူမဆန်စွာ ဆုံးဖြတ်နေမှုကို မကျေနပ်ဘူးလို့ ကော်မရှင်ရုံးမှာ အော်ဟစ်ခဲ့တယ်။ တရားဥပဒေက ခွင့်ပြုသမျှ အမြင့်ဆုံးကို တက်လှမ်းမယ်။
မိုးဆုံး၊ မြေဆုံးထိ လျှောက်မယ်လို့ ဝမ်းနည်းစွာ အော်ဟစ်ခဲ့မှုဟာ သစ္စာတရားရဲ့ အစွမ်းနဲ့ အမှန်တကယ် ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ အားလုံးကျန်းမာကြပါစေ။ လောကဓမ္မရဲ့ အလင်းတန်းများ ကမ္ဘာတဝှမ်းနေရာအနှံ့ ကျရောက်ပါစေ”ဟု သူ၏ ကိုယ်ပိုင်ဖေ့စ်ဘုတ် စာမျက်နှာတွင် ရေးသားထားသည်။
The post လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်ကို အရေးယူရန် အရေးကြီးအဆို လွှတ်တော် အတည်ပြု appeared first on ဧရာဝတီ.
via သတင်း – ဧရာဝတီ http://ift.tt/2dmunwq http://ift.tt/1PXzsvq
အိမ်အကူမိန်းကလေးနှစ်ဦးဖြစ်ရပ် လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် ဖြေရှင်းပုံ
လစာမပေးတဲ့အပြင် နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံရတဲ့ အိမ်အကူမိန်းကလေးငယ်နှစ်ဦးရဲ့ ဖြစ်ရပ်အပေါ် လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ရဲ့ ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးထားပါတယ်။
via VOA News: မြန်မာသတင်း http://ift.tt/2dfMbxo http://ift.tt/Tf1V41
Posted on September 23, 2016 by freeburma
via VOA News: မြန်မာသတင်း http://ift.tt/2cLob2o http://ift.tt/Tf1V41